Published May 27, 2020 at 10:38 PM CDT
Magaala sioux city naannawa metrotti namni 5 dabalan du’uu himan. Namni 3 magaala Woodbury country, 2 amoo Dakota country ta’uu himame. Waliigalatii namni du’e 56 gaheera.
State Iowa guututi nama 495 du’uu fi nama 18,300 qabaman gahuu isaa harbaa se’ati booda gabaafamera.
Manni fayyaa South Dakota akka gabaaseti namni 4 dabalataan duu’u fi namni 57 haarawa covid-19 qabamuu gabaase.
Du’a haarawa waliin South Dakota keesati namni du’e 54 gaheera. state keesati namni waliigalati qabame 4,700 taruu himan.
Hard Rock Hotel fi Casino akka yadannitti Kibxata June 2 sa’ati 9am akka banamu himan.
Akka oduu har’a gad dhiifameti casino sadarkaadhan banu, awalla taba tapheezaara banu, valet fi buffet banuuf hergarii karoorfateera.
Akkasumas, yeroon hojiis nii gabaabatta, wiyxata iraa hanga Jum’a sa’ati 7 a.m hanga 3 a.m kan hojatuudha. sanbanta guddaa lamaan se’ati 24 hojattuu. akkasumas quyyaa ayyaana sa’atti nijijjiramaa.
Odoo casino osoo hin seenin namuu hoo’i isaa kan laalamuudha fi ammaa amma qulqullefamaa. hojatooni ummata waliin dalagan haguugi fuula niffayadamu akkasumas maamiltooni akka haguugi fuula fayyadaman himan.
Tabni Nebraska fi komishi bohaarti hanga June 15 tti cabins, longes fi sochiin gurmiin cufamuura jira. Durabu’aan akka himetti bakki hojattootaa fi maamiltotaa akka bakka qulqullufi nagaaya ta’u barbaane. Seeri dabalata hanga bahutti bakkeen tabaa fi bakken nayaata hincufama.
Local NewsLocalIowaWoodbury CountyNebraskaSouth DakotaHard RockTyson FoodsnewsDakota CountyCOVID-19OromoBuena Vista County
Iowa governor Kim Reynolds kutaa keessatti seera dabalataa adeemsisa jirtii
Iowa governor Kim Reynolds kutaa keessatti seera dabalataa adeemsisa jirtii. Jimaata irraa jalqabee mana fiilmii, muuziyeemii, bakka bineensota fi bakki…
Erga guyyaa Jimaata governor Kim seera baste booda se’ati 24 kessatti sababa coronavirus namni bay’e du’u manni fayya Iowa Department gabaase.Guyyaa Kamsa…
Manni fayyaa Sioux land guyyaa Jimaata sababa covid-19 namni dabalatan du’uu himan. Waliigalatti magaala Woodbury county keessati namni du’e 26. Duuti…
Akka oduu confenrence har’ati Iowa governor Kim Reynolds dhukuba babalina covid-19 hiri’isuudhaf seera dabalata akka gootu himte.Wiiyxata dhufu, kan akka…